Rag qirtay qaraxyadii Kambala - BBC News Somali
Rag qirtay qaraxyadii Kambala
13 Agoosto 2010
Danbibaarayaasha Uganda ayaa xiray afar qof oo ay ku sheegeen in ay ka danbeeyeen labadii weerar ee banmaano ee lagu qaaday magaaladda Kambala bishii hore oo lagu dilay dad ka badan todobaatan qof oo daawanayay ciyaartii ugu danbeysay ee Koobkii Kubadda Cagta ee Adduunka.
Shir jaraa'id oo lagu qabtay magaaladda Kambala ayaa afartan qof ee lagu shaki qabo oo kuligood u dhashay dalka Uganda waxay qirteen doorkii ay ku lahaayeen qaraxyada oo ay ku sheegeen in ay u qaadeen sababo diimeed.
Mid ka mid ah raggaas oo lagu magacaabo, Cisa Luyima ayaa ku andicooday in uu ka danbeeyey weeraradda, waxuuna sheegay in uu ka xun yahay falalka uu geystay.
Waxaa uu yiri,'Waxaan run ahaatii aad iyo aad uga xumahay qasaaraha nafeyd ee ka dhashay falalka aan geystay. Waxaan u careysnaa Mareykanka oo aan u heysto in uu mas'uul ka yahay dhibaatadda muslimiinta ku heysata adduunka oo dhan.'
Sida oo kale, Edirisa Nsubuga oo lagu eedeeyay in uu mas'uul ka ahaa bombka labaad ee lala beegsaday naadiga Ragbiga, ayaa sheegay in uu saaraa culeysa xagga makaxda ah iyo mid dhaqaalay marka lala soo xiriiray. Waxuuna yiri, ' Waxaa aan sameeyay waxay ahaayeen shar, waxaanan ahay nin sharwade ah, waxaana si weyn oo niyad ah u canbaareenayaa falalka argagixiso.'